Izindaba - Yini ukuhlukaniswa kwezindwangu?
Le nto ebizwa ngendwangu isho izinto zeshidi ezenziwe ngemicu yendwangu. Izindwangu ezijwayelekile zingahlukaniswa ngokusetshenziswa kwazo nezindlela zokukhiqiza. Ngokwenhloso yendwangu ingahlukaniswa ngezigaba ezintathu: izindwangu zokugqoka, izindwangu zokuhlobisa, izindwangu zezimboni.
Indwangu yezingubo ifaka izindwangu ezahlukahlukene zendwangu ezisetshenziselwa ukwenziwa kwezingubo, kanye nezinto ezahlukahlukene zendwangu ezifana nentambo yokuthunga, ibhande lokunwebeka, ulwelwesi lukakhololo, ulwelwesi, nezingubo ezilukiwe ezilungisiwe, amagilavu, amasokisi, njll.
Izindwangu ezihlobisayo zigqame kakhulu kunezinye izindwangu ngokuya ngesakhiwo, iphethini nokufaniswa kombala, futhi kungathiwa luhlobo lwezobuciko nobuciko. Izindwangu zokuhlobisa zingahlukaniswa ngezindwangu zasendlini, izindwangu zombhede nezindwangu zangaphandle.
Izindwangu zezimboni zisetshenziswa kabanzi ezinhlotsheni ezahlukahlukene, njengendwangu emfushane, indwangu yesibhamu, indwangu yokuhlunga, isikrini, isinyathelo esingaphansi, njll.
Okulandelayo izici eziningiliziwe zezindwangu ezisetshenziswa kakhulu:
1. Indwangu kakotini
Ukotini yigama elijwayelekile lazo zonke izinhlobo zezindwangu zikakotini. Isetshenziselwa ukwenza imfashini, ukugqoka okwejwayelekile, izingubo zangaphansi kanye namahembe. Izinzuzo zayo kulula ukuzigcina zifudumele, zithambile futhi zisondele emzimbeni, ukumuncwa komswakama, nokungena komoya okuhle. Ububi bayo kulula ukuncipha, umbimbi, ukubukeka akuyona iqonde kakhulu futhi yinhle, lapho kugqokwa kufanele kuhlale kuyinsimbi.
I-Hemp uhlobo lwendwangu eyenziwe nge-hemp, ifilakisi, i-ramie, i-jute, i-sisal, ubhanana nezinye izintambo zezitshalo ze-hemp. Imvamisa isetshenziselwa ukwenza izingubo ezikhululekile nezisebenza, futhi njengamanje, isetshenziselwa nokwenza izingubo ezejwayelekile zasehlobo. Izinzuzo zayo amandla aphakeme, ukumuncwa komswakama, ukuqhutshwa kokushisa, kanye nokungena komoya okuhle. Ububi bayo abukhululekile ukugqoka, ukubukeka kukubi, kuqinile.
Usilika yigama elijwayelekile lezindwangu ezahlukahlukene zikasilika ezenziwe ngosilika. Njengekotini, inezinhlobonhlobo eziningi nobuntu obuhlukile. Ingasetshenziselwa ukwenza okwembatha okuhlukahlukene, ikakhulukazi okokugqoka kwabesifazane. Izinzuzo zayo zilula, zilungile, zithambile, zibushelelezi, zingenisa umoya, zinemibala, zicwebezela, zihloniphekile futhi zizinhle, zikhululekile ukugqoka. Ukushoda kwayo kulula ukushwabana, kulula ukukumunca, akunamandla anele, kuyaphela ngokushesha.
I-Woolen, ebizwa nangokuthi uboya, igama elijwayelekile lezindwangu ezenziwe ngezinhlobo ezahlukahlukene zoboya kanye ne-cashmere. Imvamisa ilungele ukugqoka okusemthethweni nokusezingeni eliphezulu njengokugqoka, isudi, ijazi, njll. Izinzuzo zayo ukumelana nemibimbi nokuqina kokugqokwa, ukuthamba kwesandla esithambile, kuhle futhi kucacile, ukunwebeka, imfudumalo eqinile. Ububi bayo ikakhulukazi ubunzima bokuwashwa, abufanelanga ukwenza izingubo zasehlobo.
Isikhumba luhlobo lwendwangu yoboya bezilwane eyenziwe ukushuka. Isetshenziselwa ukwenza izingubo zemfashini nezasebusika. Ingahlukaniswa ngezigaba ezimbili: esisodwa siyisikhumba, okungukuthi, isikhumba siphathwe ngoboya obudlule. Owesibili ngoboya, okusho ukuthi, isikhumba esinoboya besikhumba obulashiwe. Izinzuzo zayo zilula futhi zifudumele, zinhle futhi ziyabiza. Ububi bayo ukuthi kuyabiza, ukugcinwa kanye nezidingo zabahlengikazi kuphezulu, ngakho-ke ayikufanele ukwenziwa iningi.
6. Intambo yamakhemikhali
I-Chemical fiber isifinyezo se-fiber fiber. Luhlobo lwendwangu elenziwe ngamakhemikhali aphezulu. Ngokuvamile, ihlukaniswe izigaba ezimbili: i-fiber yokufakelwa ne-fiber yokwenziwa. Izinzuzo zabo ezivamile umbala ogqamile, ukuthungwa okuthambile, ukudweba, okushelelayo nokunethezeka. Ububi babo ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushisa, ukumuncwa komswakama nokungangeni kahle, kulula ukukhubazeka lapho kwenzeka ukushisa, futhi kulula ukukhiqiza i-electrostatic. Yize ingasetshenziselwa ukwenza izinhlobo ezahlukahlukene zokugqoka, izinga lilonke alikho phezulu, futhi kunzima ukufika ehholo elihle.
Ukuxuba uhlobo lwendwangu ehlanganisa i-fiber yemvelo nefayibha yamakhemikhali ngesilinganiso esithile, engasetshenziselwa ukwenza izinhlobo ezahlukahlukene zokugqoka. Izinzuzo zayo azigcini nje ngokuthola izinzuzo zikakotini, i-hemp, isilikhi, uboya kanye nefayibha yamakhemikhali, kepha futhi nokugwema ukushiyeka kwazo ngangokunokwenzeka, futhi kunenani eliphansi kakhulu, ngakho-ke kuyathandwa.